Ho an’ny filoha mpanorina ny fikambanana Andry Fanabeazana sy Fanarenana Mirindra (AFFAMI), Ramatoa Raherisoa Vololona Victorine dia manamora ny famoronan’asa ny fianarana. Moramora kokoa ny mamorona asa ho an’ny olona nianatra noho ny tsy nahita fianarana raha te hampandroso firenena iray, hoy izy. Omaly alakamisy 7 febroary no nizara fanomezana fitaovam-pianarana sy tablie tamin’ireo mpianatra 58 karakarainy ity fikambanana AFFAMI ity. Zanak’olona sahirana eny amin’ny boriborintany faha-6 ireo zaza ireo ary tsy mianatra any an-tsekoly noho ny fahasahiranan’ny ray aman-dreniny. Izany indrindra no antom-pisian’ity fikambanana izay efa nijoro nandritra ny 10 taona manome fampianarana maimaim-poana ho an’ny sahirana eny amin’ny boriborin-tany faha 6. Tsy vitan’izany fa misy ihany koa ny ezaka famoronana asa ho an’ny tanora ataon’izy ireo tahaka ny fanomezana fitaovam-panjairana. Tsy hiandrasana an’iza na iza ny fampandrosoana, hoy ny filohan’ny AFFAMI fa izay tia tanindrazana dia afaka mandray andraikitra avokoa.